Ogaden News Agency (ONA) – Shir u Qabsoomay Jaaliyada Ogaadeniya Koonfur Afrika Faraca Johanesburg.
Shir u Qabsoomay Jaaliyada Ogaadeniya Koonfur Afrika Faraca Johanesburg.
Waxaa caawa oo ay tariikhdu tahay 21/7/2018 kulan isugu yimid jaliyada ogadeneniya ee wadanka koonfur Afrika faraca johonesburg Kulankan oo ahaa mid si heersara ah losoo agaasimay ayaa waxaa xubnaha lagu siiyay Warbixinta go’aamadii kasoo baxay Shirwaynihii sadexaad ee jabhada Wadaniga xoraynta ogadeneniya oo dhowaan lagusoo gaba gabeeyay dalka Eritrea.
Waxaa Sidoo kale Shirka lagu dhamaystiray maamulka jaaliyada oo ay wax ka dhinayeen. Xubnihii goobta isagu yimid ayaa isku raacay in hawlaha halganka ee kasocda Dalka konfur afrika qof kasta meel lagu soo hagaago si loo dardar galiya halganka gobanimo doonka ah ee uu shacabka ogadenia xaqiisa kuraadinayo.
Shirkan ayaa qayb ka ahaa shirar ay qabanaayeen ergadii kasoo laabatay shirka ayaa wuxuu kusoo dhamaaday si guul ah waxaana lagu balamay in lasii laban laabo halganka Ogaadeniya ee ka socda wadanka Koonfur Afrika.